नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर कल्पनाको न’ग्न तस्वीर सार्वजनिक गरेपछि रि’सको झोँक’मा उनले ह त्या(भिडियोसहित) – Khabar PatrikaNp
नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर कल्पनाको न’ग्न तस्वीर सार्वजनिक गरेपछि रि’सको झोँक’मा उनले ह त्या(भिडियोसहित)
August 11, 2020 310
यही आइतबार बिहान टोखा नगरपालिका–१० गोंगबुमा टा उको र शरीर छुट्याइएको अवस्थामा एउटा श व फेला पर्‍यो । लगत्तै महानगरीय प्रहरी परिसर र महानगरीय अप’राध महाशा’खाको संयुक्त टोली तालिम प्राप्त कुकुरको सहयोगमा घ टनाको अनु’सन्धानमा जुट्यो । शव रोल्पा स्थायी घर भएका कृष्णबहादुर बोहोराको रहेको पत्ता लाग्यो ।
घट’नाको दुई दिनमा प्रहरीले ह’त्या आ’रोपमा चितवनकी कल्पना मुडभरी पौडेललाई प’क्राउ गर्‍यो । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी श्यामलाल ज्ञवालीका अनुसार आरो’पित कल्पनाले प्रहरीमा दिएको बयान अनुसार कृष्णबहादुरको ह त्या उनैले गरेकी हुन् ।
कल्पानाको प्रारम्भिक बयान उ’दृत गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘आठ महिनादेखि होटलमा बस्दै आएका कृष्णबहादुर र कल्पनाबीच तीन–चार वर्षअघि फेसबुकबाट चिनजान भएको थियो । यही क्रम’मा कृष्णबहादुरले नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर कल्पनाको न’ग्न तस्वीर सार्वजनिक गरेपछि रि’सको झोँक’मा उनले ह त्या गरेकी हुन् ।’
कल्पनाले कृष्णबहादुरले पटकपटक ‘सेक्सु’अल ह्या’रेसमेन्ट’ गरेकाले आवेशमा आएर ह त्या गरेको प्रार’म्भिक ब’यान प्रह’रीमा दिएकी छन् । बयान अनुसार उनले शनिबार कृष्ण’बहदुरलाई आफ्नो कोठामा बोलाएर दहीचिउ’रासँगै भो’ड्कामा निद्रा लाग्ने नशा’लु पदार्थ मि’साएर खुवाइन् ।
त्यही नशाको प्रभावले कृष्णबहादुर ल’ट्ठ भएपछि ह्यामरले अण्ड’कोषमा हानेर बेहो:स बनाइन् । लगत्तै सलले घाँ’टी कसे’र ह त्या गरिन् ।
कल्पनाले प्रहरीमा दिएको बयानअनुसार मृ’त्यु भइसकेपछि आफ्नै भन्छाकोठामा भएको धारि लो हति’यारले टाउको र खुट्टा छि’नाइन् । टुक्रा टुक्रा श वलाई आफैसँग भएको झोला र सुटकेशमा हालेर सडकमा लगेर फालिन् । यसपछि उनी मा’इती जान्छु भन्दै एम्बुलेन्स चढेर चितवन पुगेकी थिइन् । प्र’हरीले उनलाई सोमबार साँझ चितवनबाट प’क्राउ गरेर काठ’माडौं ल्याएको हो ।
प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी ज्ञवालीका अनुसार कल्पनाकी १७ वर्षीया छोरीले समेत शव व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको खुलेको छ । कल्पनाले प्रह’रीमा दिएको बयानमा ह त्या आफू एक्लैले गरेको र श व व्यवस्थापनमा छोरीले सहयोग गरेकी हुन् । प्रह’रीका अनुसार ह त्यामा दुई वटा खुकु’रीको प्रयोग भएको पाइएको छ ।
प्रहरीको प्रार’म्भिक अनुसन्धान अनुसार कृष्णब’हादुरको ह’त्याको मुख्य कारण यौ’न शो’षण भएको खुलेको छ । परिसर प्रमुख एसएसपी ज्ञवाली भन्छन्, ‘कल्पनाले कृष्णबहादुरको ह त्या गर्नुको मुख्य कारण यौ न शोष ण गर्नु र न’ग्न तस्बि’र फेसबुकमा राख्नु नै देखिएको छ ।’
ज्ञवालीका अनुसार न’ग्न तस्वीर सार्वजनिक गर्ने र पटक पटक ह्या’रेसमेन्ट गर्ने गरेको हुँदा आवेगमा आएर ह त्या भएको देखिएको छ । उनले भने, ‘घटना बारे थप अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, अनुसन्धान सकिएपछि थप तथ्य बाहिर आउँछ ।’ कल्पना’को श्रीमान् भने विदेशमा रहेको प्रार’म्भिक अनुसन्धान’बाट थाहा भएको छ ।
परिसर प्रमुख एस’एसपी ज्ञवालीका अनुसार कृष्णबहादुरको हत्या गरिसकेपछि कल्पनाले छोरीको सहायतामा श व व्यवस्थापन गरिन् । यसपछि आइत’बार बेलुका एम्बुले’न्समार्फत चितवन पुगिन् ।
घट’नास्थलबाट प्र’हरीले प्रमाणका रूपमा मृत’कलाई हि’र्काउन प्रयोग भएको ह्याम्मर, धा’रिलो हति’यार, रग’त लतप’तिएको पन्जा, घाँटी क’स्न प्रयोग भएको का’लो सल, नाम्लोमा प्रयोग भएको डोरीको टुक्रा, सुटकेशको ह्याण्डल र स्लिपिङ ट्याबलेट (निद्रा गाल्ने औषधि) का खोल बरामद गरेको छ ।
अनुसन्धा’न अनुसार कृष्णबहादुर कल्पनाको कोठामा पटकपटक जाने गरेको खुलेको छ । कल्पना र कृष्णबहादुरबीच आर्थिक कारोबारको वि’वाद रहेको समेत खुलेको छ । कल्पना कला’कार समेत रहेको खुलेको छ । प्रहरी’का अनुसार कल्पनाले केही टेलिशृङ्ख’लामा अभिनय गरेकी छन् ।
आइतबार बिहान सुटकेसमा टाउको र खुट्टा नभएको एउटा श व भेटिएको थियो । प्रहरीले घ’टनाको पत्तो पाएसँगै तालिम प्राप्त कुकुर जोजोको सहयोगका अनुसन्धान सुरु गर्‍यो । केही बेरमा श’वभन्दा करिव ३०० मिटर पर टाउ’को र खुट्टा भएको झोला जोजोले पत्ता लगाएको थियो।
टाउ’को भेटिएपछि प्रहरीलाई मृ तकको पहिचान गर्न सजिलो भयो । मृतकको पहिचान पछि प्र हरीले अभि युक्त पक्रा उ गर्न सफल भएसँगै प्रह’रीको अप’रेसन जोजो सफल भयो । यो समाचार गजेन्द्र बस्नेतले खबर हब मा लेख्नु भएको छ ।
यहाँ थिचेर भिडियो हेर्नुहोस्..
Prevकोरोना भन्दै रोशन सुनारको झापाका अस्पतालले उपचार गर्न नमान्दा मृत्यु
Nextभाग्य न्यौपानेको घर अनि परिवार (भिडियो सहित)
सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक आज
साक्षात भगवान शिबको पाउलाई छोएर एक दर्शन गरी पुन्य कमाउनुहोस ,ॐ ॐ ॐ !
कान्छो छोराको कुटपिटबाट घाइते आमाको मृत्यु
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (33491)